ukuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo
Eyona Qa Ukuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo nge-E
Ukuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo nge-E
Uvavanyo lwe-E-commerce IiWebhusayithi zifuna ulwazi ngeendlela zokuvavanya iwebhu kunye ne-e-commerce domain.
Uninzi lweewebhusayithi ze-E-commerce zabelana ngomxholo oqhelekileyo kunye nolwakhiwo, o.k.t.
Iziphumo zePhepha lokuKhangela
Ifom yoku-odola iphepha
Iphepha lokuNgqinisisa iodolo
Iphepha lokuNgena leFomu kunye namaPhepha eeAkhawunti
Ewe, maninzi amanye amaphepha kwiwebhusayithi ye-e-commerce eqhelekileyo, kodwa olona hambo lusisiseko lomsebenzisi luya kubandakanya ukuchukumisa la maphepha angentla kwaye kulapho ukuvavanywa kwewebhusayithi zorhwebo kufuneka kugxile khona: Uhambo lokuphuma.
La maphepha 'angaphambili' kunokwenzeka ukuba aqhagamshelane 'ne-back-end' yeenkonzo zewebhu, ezinje ngeNkonzo yokuKhangela kweMveliso, iNkonzo yokuQiniseka, iNjini yokuBhukisha, iiNkonzo zokuHlawula, iiNkonzo zeeAkhawunti, njl.njl. Sivavanya iinkonzo ezizodwa sodwa kwaye sidityanisiwe njengenkqubo iphela.
Ukuhamba ngokuhamba komsebenzisi okuqhelekileyo kuya kuqala kwiphepha lasekhaya, okanye iphepha lokufika kwemveliso, ukukhangela imveliso, ukuphonononga imveliso, ukongeza imveliso (s) kwinqwelo yokuthenga, gcwalisa iinkcukacha zoku-odola kunye neenkcukacha zokuhlawula kunye nokuthumela iodolo.
Izimvo zokuvavanya iiwebhusayithi ze-E-commerce
Sele sithethile iingcebiso kunye nezikhokelo zokuvavanya usetyenziso lwewebhu kunye neendlela zovavanyo eziqhelekileyo kunye neendlela zovavanyo lokuvavanywa kwesicelo sewebhu esisebenzayo ekuvavanyeni iiwebhusayithi zorhwebo.
Kule nqaku, sivavanya iimeko ezithile zovavanyo ezikhethekileyo zokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo. Izimvo eziboniswe apha zezinye iimeko zovavanyo lwenqanaba eliphezulu ezisetyenziselwa uninzi lweewebhusayithi zorhwebo, kwaye ungasebenzisa esi sikhokelo ukuqalisa ngokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo.
Ukuvavanywa kwinqwelo othengela kuyo
Iinqwelo zokuthenga zezona zinto ziphambili kwiwebhusayithi ye-e-yorhwebo kwaye yiyo loo nto zenza indawo ephambili yokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo. Ivumela abathengi ukuba bakhethe kwaye bagcine izinto ezininzi kwinqwelo kwaye bazithenge zonke ngaxeshanye.
Kule mihla, iinqwelo zokuthenga ziye 'zakrelekrele' ngengqondo yokuba ziyakhumbula ukuba zeziphi izinto ozigcina kuzo ukuze ukwazi ukuzibuyisa kamva okanye nakwesinye isixhobo.
Kwiimeko ezininzi, ii-cookies zisetyenziselwa ukugcina idatha yeenqwelo okanye ukuba umsebenzisi uneakhawunti esebenzayo kwaye ungene, i-id yeseshoni inokugcinwa ngokuchasene nomsebenzisi kwindawo yogcino lwedatha. Nokuba yeyiphi indlela, kukho iimeko zovavanyo eziphambili ezinokuba yinxalenye yovavanyo kwinqwelo yokuthenga.
Yongeza into enye kwinqwelo -Iinqwelo kufuneka zihlaziywe ngento enegama elichanekileyo, umfanekiso kunye nexabiso.
Yandisa ubungakanani bento kwinqwelo Ixabiso kufuneka lihlaziywe ukubonisa inani elichanekileyo.
Yongeza into efanayo amaxesha amaninzi -kuya kubakho into enye kwinqwelo, kodwa ubungakanani kufuneka bubonakalise inani lokongezwa kwaye ixabiso lilonke kufuneka libonakalise ixabiso lexabiso lento nganye.
Yongeza izinto ezininzi zeentlobo ezahlukeneyo Kwinto nganye eyongeziweyo, kuya kufuneka sibone igama elihambelanayo, umfanekiso, kunye nexabiso kunye nexabiso elipheleleyo lezinto zonke.
Susa ezinye izinto kwinqwelo -Iinqwelo kufuneka zihlaziye izinto esele zikhona kwinqwelo, ixabiso lilonke kufuneka libonakalise isixa esitsha.
Susa zonke izinto kwinqwelo -Ukulingana kwenqwelo kufuneka kungabikho, akukho zinto maziboniswe kwinqwelo.
Cofa kwinto ekwinqwelo -Sifanele sikwazi ukubona ulwazi oluthe kratya malunga nemveliso esiyicofileyo njengokuphambuka okanye ukuhambisa kwakhona kwiphepha lemveliso.
Yongeza izinto (i) kwinqwelo, vala isikhangeli kwaye uvule indawo enye -ngokufanelekileyo, inqwelo kufuneka isabambe izinto zakho. Qaphela ukuba oku kuxhomekeke ikakhulu kwiimfuno zendlela enqwenelekayo yokuziphatha ngayo.
Iikhuphoni -Sidinga ukujonga ukuba ixabiso lenqwelo lehlile xa sisebenzisa ikhuphoni kwaye singaphungulwanga xa sisebenzisa isigqebhezana esingavumelekanga okanye esiphelelwe lixesha.
Ifom yokuKhangela, ukuHlela, Ukuhluza, iPagination
Ifom yokukhangela ihlala ikhona kumaphepha amaninzi ukuvumela abasebenzisi ukuba bakhangele iimveliso naphi na apho bakhoyo kwisiza. Ke ngoko, kubalulekile ukuba indawo yokukhangela ivavanywe kumaphepha asebenzayo.
Uninzi lwekhowudi yemodyuli yokukhangela iphinda isetyenziswe kumaphepha amaninzi okanye iitemplate, okanye inokuba yinxalenye yecandelo le-header eliboniswe kuyo yonke indawo. Ukuba kunjalo, indlela yokuziphatha kwinto yokukhangela kufuneka ifane naphi na apho yenzekayo kwaye ukuqhuba onke amatyala ovavanyo kuwo onke amaphepha kuyinkcitho yomthambo.
Ukuvavanya iiwebhsayithi ze-e-commerce akuyi kuba mnandi ngaphandle kokuvavanya elona phepha linobutyebi kwisiza, iphepha lokuKhangela.
Xa sikhangela imveliso, siphinda siqondiswe kwiPhepha leZiphumo zoPhando (i-SRP) ngazo zonke izinto ezifanelekileyo esizifunayo. Zininzi izinto ekufuneka ujonge kuzo kunye nezinto ezininzi ekufuneka uzivavanye, kodwa izinto ezintathu ezibaluleke kakhulu kwaye zibaluleke ngokukodwa kwi-SRP kukuhlela, ukuhluza kunye ne-pagination.
Iimveliso ezifanelekileyo -Jonga ukuba iimveliso ezibonisiweyo zinxulumene noko bekukhangelwa.
Ulwazi ngemveliso -Iimveliso kufuneka zibonise umfanekiso, igama, ixabiso kunye nokulinganiswa kwabathengi kunye nenani lokuphononongwa.
Inani leemveliso kwiphepha ngalinye -Jonga ukuba inani leemveliso kwiphepha ngalinye liyahambelana neemfuno.
Ubume -Jonga ukuba zonke izinto ezikwiphepha elilandelayo zahlukile kwiphepha langaphambili, okt akukho zimpinda
Ukuhlela -Kunokubakho iindlela ezine ukuya kwezintlanu onokukhetha kuzo kwimenyu ehlayo. Ukuhlela kuhlala kukhetho olunye, o.k.t. unokuhlela ngeparameter enye kuphela.
Ukuhlela kunye nePagination -Ukuba kukho iimveliso kumaphepha amaninzi xa uhlela ngeparameter, iodolo yohlobo kufuneka ihlale njengoko usenza i-paginate, okanye iimveliso ezingaphezulu zilayishiwe (ukuba ngumthwalo we-Ajax)
Ukucoca -Ngokungafaniyo nokukhetha uhlobo, ukhetho lweefilitha lukhetho oluninzi, oko kukuthi unokucoca ngeeparameter ezininzi. Ngumbono olungileyo ukuphonononga amacebo okucoca kunye nokukhetha iifayile ezininzi.
Ukuhluza kunye nePagination - Kwakhona, oku kubalulekile, xa sihluza kwiphepha elinye, ngokuchanekileyo, njengoko singena paginate sifuna ukuba icebo lokucoca ulwelo lisetyenziswe kulo lonke.
Ukuhlela nokuCoca -imeko ebalulekileyo yovavanyo kukuxuba ukukhetha kunye nokucoca iinketho kunye, o.k.t. Icebo lokucoca ulwelo ngexabiso emva koko ulungelelanise ngexabiso eliphezulu ukuya ezantsi, okanye enye indlela ejikeleze. Ngelixa izinto ezizezabo zinokusebenza ngokuchanekileyo, xa zidityaniswe nelinye inqaku, ukusebenza kwento enye okanye zombini ezi zinto zinokwaphuka, ke kubalulekile ukuba siqwalasele iziphumo xa sidibanisa ukuhluza kunye nokukhetha.
Ukuhlela, Ukucoca, kunye nokuHamba -Oku kukujonga ukuba xa zombini iintlobo kunye neefilitha zisetyenzisiwe, zihlala njengoko sinikezela okanye ezinye iimveliso zilayishwa.
Yenza iAkhawunti kunye nokuNgena
Ezinye iiwebhusayithi zorhwebo zikuvumela ukuba uthenge into njengondwendwe, okt ngaphandle kwesidingo sokwenza iakhawunti, kwaye inyathelo lokukhetha ukwenza iakhawunti xa kufakwa iodolo.
Xa iakhawunti yenziwe, umsebenzisi angangena kulo naliphi na ibakala ngexesha lokuthenga. Kubalulekile ukuba siluvavanye lonke olu umahluko kuhambo lomsebenzisi xa kuvavanywa iiwebhusayithi zorhwebo.
Thenga into njengondwendwe -Ukuba indawo iyavuma, vavanya ukuba ungathenga into ngaphandle kokwenza iakhawunti.
Iakhawunti ezikhoyo nezintsha -Ukuthenga into ngeakhawunti esele ikho kunye neakhawunti esandula ukwenziwa.
Yenza iakhawunti kwaye ungene phambi kokuthenga -Oku kukuvavanya ukuba into oyithengayo iyongezwa kwaye idityaniswe kwiakhawunti echanekileyo. Kwakhona, awuzukuyalelwa ukuba ungene kwakhona xa sele ungene.
Ukuphinda ungene kwakhona -Jonga indlela yokuziphatha kwento yokungena kwiphepha elahlukileyo. Ezinye iisayithi zibuyisela umsebenzisi kwiphepha elinye apho bacofe khona ikhonkco lokungena kwaye ezinye iisayithi zibhekisa umsebenzisi kumaphepha eakhawunti. Oku kufuneka kuvavanywe ngokupheleleyo.
Iseshoni yokungena -Ukungena kwakho ukhangela ukuba uhlala ungene ngemvume xa ukhangela iimveliso. Kwakhona, kufuneka uvavanye indlela yokuziphatha xa umsebenzisi engadibani nesiza kangangexesha elithile. Ngaba iseshoni iya kuphelelwa lixesha emva kwexesha? Qinisekisa ukuba umsebenzisi ukhutshiwe emva kwexesha lokuphuma.
Ukungena kunye nokuphuma -Ukuze ungene ngemvume, phuma kwaye uqiniseke ukuba uphumile kwaye awunakho ukufikelela kulo naliphi na iphepha leakhawunti.
Iintlawulo ziyinxalenye ebalulekileyo yokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo. Emva kwayo yonke loo nto, yile nto evumela abasebenzisi ukuba bathenge izinto zabo ngaphandle kwesidingo sokutsalela inombolo ukubeka iodolo yabo.
Iindlela zokuhlawula Iindidi zokuhlawula ezahlukeneyo kufuneka zonke zivavanywe, o.k.t. Ikhadi letyala, i-Paypal, ukuGqithisela iBhanki, iiFowuni, njl
Iinkcukacha zeKhadi - ngaba indawo yokugcina iinkcukacha zamakhadi omthengi? Ukuba kunjalo zigcinwa ngokukhuselekileyo? Injalo I-PCI iyahambelana ?
Uvavanyo lwasemva kokuThengwa
Xa sibeka iodolo, zininzi izinto ezinokwenziwa ngabasebenzisi ezinxulumene nokuthenga kwabo. Ukuvavanya ukusebenza emva kokuthenga kukwayinto ebalulekileyo yokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo. Oku kunokuba zezi:
Rhoxisa iodolo okanye utshintshe ubungakanani beodolo
Ukuphonononga iodolo yakho yakutshanje kunye nembali yezinto ezithengiweyo
Utshintsho kwiakhawunti, njengedilesi yetyala, idilesi yokuthumela, ipassword, ulwazi ngeprofayile njengegama, idilesi ye-imeyile kunye nokususa iakhawunti.
Alithandabuzeki elokuba ukuvavanywa kwewebhusayithi yorhwebo kulucelomngeni kwaye kufuna isakhono esikhulu. Eli nqaku liyincam ye-iceberg yazo zonke iimeko zovavanyo ezifanelekileyo ezinokuthi zenziwe xa kuvavanywa iiwebhusayithi zorhwebo kwaye zinokusetyenziswa njengesiqalo.
Zininzi izinto eziza kuvavanywa njengenxalenye yokuvavanya iiwebhusayithi zorhwebo ezifana:
Imveliso ye carousels kunye neemveliso ezicetyiswayo.
Ukuboniswa ngokuchanekileyo kolwazi kwiPhepha leeNkcukacha zeMveliso elihlala linomxholo onzima.
Isiseko sedatha yemveliso-igcinwa njani idatha emva kokuba kuthengiwe into?
Inkqubo yoGcino- indawo yokugcina okanye umntu wesithathu waziswa njani xa kufakwa iodolo?
Ukunxibelelana nomthengi, ii-imeyile zokuqinisekisa, imixholo ye-imeyile, ukubuya, izikhalazo, njl.
Yintoni ebaluleke kakhulu xa kuvavanywa iiwebhusayithi zorhwebo, kukuqinisekisa ukuba inqaku ngalinye liphumeze ngokuchanekileyo iimfuno zalo.
jonga uxinzelelo lwegazi ngefowuni
Usuku lukaTata kunye ne-apos; Isikhokelo sesipho se-2018: Fumana iipopu zakho isipho sobugcisa
Isikhumba esikhethekileyo se-Samsung Galaxy Fortnite GLOW ngoku iyafumaneka ukuze ikhutshelwe
Ezona fowuni zibalaseleyo zeSIM